တိုက်ခိုက်နေမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နီလန်းကတော့ အခုလိုပြေလိုက်ပါပြီ...
ပြိုင်ပွဲဝင်မောင်နှမတွေအတွက် ဆဲဆိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေကို နီလန်းက ပြောပြီ
Myanmar Idol Season3ပြိုင်ပွဲ ၀င်နီလန်းဟာဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သူမရဲ့အသံချိုချိုလေးကြောင့် ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးခြင်း ခံထားရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦးပါ။ သူမက ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ ရပေမယ့်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲ ရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းပြောထားပါသေးတယ်။
နီလန်းက ယခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ Myanmar Idol အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်မောင်နှမတွေအတွက် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ် တွေအတွက် နီလန်းရဲ့ ပြောကြားချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
နီလန်းက “ကျေးဇူးပြု၍ …..ဘယ်သူ့ကိုမှမတိုက်ခိုက် မပုတ်ခတ်ပဲ နေလို့မရဘူးလား ??အနိုင်ယူချင်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူလို့ရပါတယ်။#please#peace#sorryfortop2” ဆိုပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် တွေကို ဝေဖန်နေတာထက် တိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေတဲ့ သူတွေကို အနိုင်ယူမယ်ဆိုရင်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ အနိုင်ယူလို့ရပါတယ်လို့ စိတ်မကောင်းစွာ ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Top 2ပြိုင်ပွဲ ၀င် နှစ်ယောက်လုံးကလည်း အရည်အချင်းရှိလို့သာ ဒီလိုနေရာမှာ ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်တာကြောင့် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက်ကို အပြိုင်အဆိုင် ပြောဆိုတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်် နီလန်းက ခုလိုလေးပြောထားတာပါ။
ပြိုင်ပွဲဝင်အချင်းချင်းကတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့ မောင်နှမတွေဖြစ်တာကြောင့် တိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တချို့ကြောင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Myanmar Idol Season 3ပြိုင်ပွဲဝင် နီလန်းက Top2ပြိုင်ပွဲ ၀င် မောင်နှမတွေကို မတိုက်ခိုက် ၊ မပုတ်ခတ်ဖို့ ပြောထားတာကို ပရိသတ်တွေတွေ့မြင်ရလောက်ပြီထင်ပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ် ကြီးကလည်း နီလန်းနဲ့ တွေးအမြင်ချင်းတူပါလားပရိသတ် ကြီး။
Source; nilen ‘s facebook
ပွိုငျပှဲဝငျမောငျနှမတှအေတှကျ ဆဲဆိုတိုကျခိုကျနတေဲ့သူတှကေို နီလနျးက ပွောပွီ
Myanmar Idol Season3ပွိုငျပှဲ ဝငျနီလနျးဟာဆိုရငျ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မကျြနှာလေးကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး သူမရဲ့အသံခြိုခြိုလေးကွောငျ့ ပရိသတျတှခေဈြခငျအားပေးခွငျး ခံထားရတဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျတဈဦးပါ။ သူမက ပွိုငျပှဲကနထှေကျခဲ့ ရပမေယျ့အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာပဲ ရှိနမှောဖွဈကွောငျးပွောထားပါသေးတယျ။ နီလနျးက ယခုလကျရှိဖွဈနတေဲ့ Myanmar Idol အခွအေနနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွိုငျပှဲဝငျမောငျနှမတှအေတှကျ မခံမရပျနိုငျဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျ တှအေတှကျ နီလနျးရဲ့ ပွောကွားခကျြလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
နီလနျးက “ကြေးဇူးပွု၍ …..ဘယျသူ့ကိုမှမတိုကျခိုကျ မပုတျခတျပဲ နလေို့မရဘူးလား ??အနိုငျယူခငျြလညျး ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့အနိုငျယူလို့ရပါတယျ။#please#peace#sorryfortop2” ဆိုပွီး ပွိုငျပှဲဝငျ တှကေို ဝဖေနျနတောထကျ တိုကျခိုကျပုတျခတျနတေဲ့ သူတှကေို အနိုငျယူမယျဆိုရငျလညျး ခဈြခွငျးမတ်ေတာနဲ့ အနိုငျယူလို့ရပါတယျလို့ စိတျမကောငျးစှာ ပွောထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
Top 2ပွိုငျပှဲ ဝငျ နှဈယောကျလုံးကလညျး အရညျအခငျြးရှိလို့သာ ဒီလိုနရောမှာ ရပျတညျနတော ဖွဈတာကွောငျ့ ပွိုငျပှဲဝငျတှရေဲ့ပရိသတျတှကေလညျး တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျကို အပွိုငျအဆိုငျ ပွောဆိုတိုကျခိုကျနတောကွောငျ့ နီလနျးက ခုလိုလေးပွောထားတာပါ။
ပွိုငျပှဲဝငျအခငျြးခငျြးကတဈယောကျကို တဈယောကျအရမျးခဈြကွတဲ့ မောငျနှမတှဖွေဈတာကွောငျ့ တိုကျခိုကျပုတျခတျနကွေတဲ့ ပရိသတျတခြို့ကွောငျ့ စိတျမကောငျး ဖွဈနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
Myanmar Idol Season 3ပွိုငျပှဲဝငျ နီလနျးက Top2ပွိုငျပှဲ ဝငျ မောငျနှမတှကေို မတိုကျခိုကျ ၊ မပုတျခတျဖို့ ပွောထားတာကို ပရိသတျတှတှေမွေ့ငျရလောကျပွီထငျပါတယျ။
ခဈြပရိသတျ ကွီးကလညျး နီလနျးနဲ့ တှေးအမွငျခငျြးတူပါလားပရိသတျ ကွီး။